Valencia oo abaalmarinta xidiggii ugu fiicnaa kulankii Man U vs Arsenal u hibeeyay shaqaalaha caafimaadka MU – Gool FM
Valencia oo abaalmarinta xidiggii ugu fiicnaa kulankii Man U vs Arsenal u hibeeyay shaqaalaha caafimaadka MU
(Manchester United), 20 Nof 2016 –Ciyaaryahankaka Garabka Midig ee kooxda Manchester United Antonio Valencia ayaa la guddoonsiiyay laacibkii ugu fiicnaa ‘Man o the Match’ ciyaartii shalay ee Man United iyo Arsenal 1-1 ee Horyaalka Ingiriiska.
Xidiggan Reer Ecuador oo isagu gacanta ka jabay 26 Oktoobar ayaa lagu sameeyay qalliin, waxaana u xigay soo noqoshadiisii ciyaartii shalay ee Arsenal.
Dhinaca kale Valencia ayaa abaalmarintan la siiyay waxa uu u hibeeyay shaqaalaha Caafimaadka ee kooxda Manchester United kuwaas oo uu uga mahad celiyay sidii ay ugu dul qaateen xilligii uu dhaawaca ahaa.
“Aad baan uga xumahay inaan 3 dhibcood qaadan weynay kulankii Arsenal, laakiin ciyaarta xigta ayaa ka sii fiicnaan doonta, waxaan doonayaa inaan abaalmarintan u hibeeyo kooxda caafimaadka Manchester United, waad ku mahadsan tihiin sidii aad ugu dul qaadateen dhaawacayga” ayuu Valencia ku soo qoray sawir uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka.
GOOGOOSKA: Middlesbrough vs Chelsea 0-1 (Chelsea oo hoggaanka ku joogta)